Rugta ganacsiga & warshadaha ee Puntland, iyo shacabka Bossaso oo cambaareeyey lacagta faalsada ah ee laga dhacay madaarka Galkacyo. – Radio Daljir
Rugta ganacsiga & warshadaha ee Puntland, iyo shacabka Bossaso oo cambaareeyey lacagta faalsada ah ee laga dhacay madaarka Galkacyo.
Luulyo 8, 2010 12:00 b 0
Bossaso, July 08 – Shir looga hadlay saamaynta dhaqaale ee lacagta faalsada ah ee la soo geliyey Puntland ayaa lagu dhaleeceeyey fal dambiyeedka ka dhacay madaarka Galkacyo. Ganacsato, indheergarad iyo culimo ayaa shirka ka qayb galay, kana faalooday saamaynta dhaqaale ee lacagta faalsada ahi ay ku yeelan doonto suuqyada ganacsi iyo bulshada Puntland.
Azhari, wasiirka Jaaliyadaha dawada federaalka ah oo aan ka waraysanay waayaha Somalida ku nool K/Afrika, Europe & W/America.
Lacagtii faalsada ahayd ee lagu qabtay madaarka Galkacyo oo la dhacay xalay.